Private Class /Subject Educators | Spring of Success Company Limited
ကျောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကို“ကျောင်းနေပျော်၍ စဉ်းစားတွေး ခေါ်တတ်အောင် စနစ်တကျပြုစုပျိုးထောင်ပံ့ပိုးပုံဖော်ပေးရန်”
ကျောင်းနေပျော်ခြင်း။ ။ကျောင်းနေပျော်ရမည်ဆိုသည်မှာ ကလေးငယ်များ ၎င်းတို့သင်ယူရသည့် ဘာသာရပ်အကြောင်းအရာအပေါ်ကို လေ့လာစူးစမ်းလိုသောစိတ် ၊ ၎င်းဘာသာရပ်ကို နှစ်သက်မြတ်နိုးသောစိတ် ၊ ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် မိဘ ၊ တို့၏ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုမပါတော့ပဲ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုက “လေ့လာသင်ယူမှုကို ချစ်မြတ်နိုးသော (Love of learng) စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အထိ Educators မှ ကမ္ဘာပေါ်ရှိပညာရှင်များ၏ သီအိုရီအကြုံပြုချက်များအားလုံးကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပြီး ထိုစိတ်များ ကလေးတစ်ဦးချင်းစီတွင် ကိန်းအောင်းလာအောင် စနစ်တကျပြုစုပျိုးထောင်ပံ့ပိုးပုံဖော်ပေးရမည်ကိုဆိုလိုပါသည်။
စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ခြင်း။ ။ကလေးငယ်များ ၎င်းတို့သင်ယူရသည့်ဘာသာရပ် အကြောင်းအရာများ နှင့်ပတ်သက်၍ Bloom’s Texonomy ၏ HOT Level အဆင့်ထိရောက်အောင် စနစ်တကျပြုစုပျိုးထောင်ပံ့ပိုး ပုံဖော်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အတတ်ပညာသာမက အသိပညာပါ ဟန်ချက်ညီညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိအောင် စနစ်တကျပြုစုပျိုးထောင်ပံ့ပိုးပုံဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ အတတ်ပညာဘာသာရပ်များကို တဖက်ကမ်းတတ်အောင် စနစ် တကျပြုစုပျိုးထောင် ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုဘာသာရပ်ကို ပြန်လည်အသုံးချရာတွင် လူသားမျိုးနွယ်များကို အကျိုးပြုနိုင်သည့် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှု ဆင်ခြင်တုံတရားဉာဏ်၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ၊ မေတ္တာတရားရှိအောင်ပါ စနစ် တကျပြုစုပျိုးထောင်ရမည်ကိုဆိုလိုပါသည်။
စနစ်တကျပြုစုပျိုးထောင်ပံ့ပိုးပုံဖော်ပေးခြင်း ၊၊ ။ များစွာသောလေ့လာသုတေသနအကြုံပြုချက်အရ လူသားမျိုးနွယ်များ မစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အရာများ မရှိပါ။ မစွမ်းဆောင်၊မဖော်ထုတ်ရသေးသည့် အရာများသာ ရှိသည်။ထို့ကြောင့် Educators အနေဖြင့် ကလေးငယ်တစ်ဦးချင်းစီကို စွမ်းဆောင်နိုင်သူ အများနှင့်မတူ ၊ တစ်မူထူးခြားသော လူသားများဖြစ်သည်ဟု အပြည့်အဝယုံကြည်ပြီး ၎င်းတို့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်များ ပေါ်ထွက် လာအောင် လေ့လာစောင့်ကြည့် သုံးသပ်အကဲဖြတ် ဖော်ထုတ်ပြုစုရန်နှင့် ထိုပေါ်ထွက်လာသောစွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိပညာရှင်များ၏ သီအိုရီများနှင့်အညီ ဘက်ပေါင်းစုံထောင့်ပေါင်းစုံမှ အပြည့်အဝ စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်ပံ့ပိုးပုံဖော်ပေးခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ Educators မှ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပညာရှင်များ၏ လမ်းညွှန်ချက်သီအိုရီများကို အသုံးချ၍ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း အရည်အသွေးများပေါ်ထွက်လာသည့်အထိ စနစ်တကျပြုစုပျိုးထောင်ပံ့ပိုးပုံဖော်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
- English Language ကို ကောင်းမွန်စွာ ပြောနိုင် ၊ ရေးနိုင်ရမည်။
- သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။
- ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတများ ရှိရမည်။
- ကူးစက်ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာ ပါရှိရမည်။
- ပညာရေးနယ်ပယ်ဖြစ်၍ တစ်လလျှင် စာအုပ်အနည်းဆုံး ၂ အုပ်ဖတ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Basic salary for one month - Above 300000 MMK
GETC and NURTURE in one of the leading professional language schools, preschools and private schools in the city of Yangon and Mandalay, Myanmar. It is founded in 2007 andaprivately - owned organization with more than 200 staff members and 15 branches. We haveasolid and positive reputation in the city. Students and parents often say that it is the best school that give intensive care and provide High Quality English Language Teaching, Early Childhood and Primary Education.